मिस्टर भर्जिनका तीन पात्र यौनकर्मीको कोठामा किन गए ? ( टिजर )FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मिस्टर भर्जिनका तीन पात्र यौनकर्मीको कोठामा किन गए ? ( टिजर )
फिल्मी फण्डा । र्वल्ड वाइड फिल्मस्को ब्यानरमा निर्मित फिल्म मिस्टर भर्जिनको टिजर सार्वजनिक भएको छ । फिल्म युनिटले सामाजिक सञ्जाल युट्युबबाट उक्त टिजर सार्वजनिक गरेका हुन् । टिजरमा फिल्मका मुख्य कलाकारहरु फिचर्ड छन् । उक्त टिजरमा मरिष्का पोखरेल मेडिकलमा गई कन्डम किनेको देख्न सकिन्छ । बिशारद बस्नेतले निर्देशन गरेको फिल्ममा बिक्रम स्वांर र दिपक मान सिहंको कोरियाग्रफी रहेको छ ।
उक्त गीतमा सुरज पण्डितको स्वर ,शब्द र सङ्गीत रहेको छ । फिल्मलाई लेखन गरेका महेश दवाडी यस फिल्मको सह निर्देशक पनि हुन् । फिल्मलाई खिलेन्द्र तिमल्सिना, प्रजापती सिवाकोटी, मुकेश रेग्मी र बिशारद बस्नेतले निर्माण गरेका हुन् भने सन्दिप उप्रती र मनिषा खत्री यस फिल्मका सह निर्माता हुन् ।
कमेडी जनरामा बनिने यस फिल्ममा भोलाराज साप्कोटा, कमलमणी नेपाल, गौरव पहारी, बिजय बराल, रबिन्द्र झा, मरिश्का पोखरेल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहको छ । भर्जिन पात्रहरुको मनोविज्ञानमा निर्मित उक्त फिल्मलाई रामेश्वर कार्कीले खिचेका हुन् ।